မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားရဲ့နောက်ကွယ် | PRO-X Software Solution
“မလုပ်နိုင်ဘူး” “အားနည်းတယ်” “မကျွမ်းဘူး” ဒီစကားတွေကို တော်တော်များများ သုံးဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခနခန သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ဒီစကားကို ပြောရုံလောက်သာ ပြောကြပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့ ဒီစကားရဲ့ နောက်မှာ ပုန်းကွယ်ပြီး ကိုယ်အားနည်းတဲ့ အရာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ခေါင်းရှောင်တာမျိုး၊ ထွက်ပြေးတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်လာရင် အရမ်းအားနည်းတာပါ။ သင်ပေးလည်း နားမလည်၊ ပြောလည်း မမှတ်မိ၊ ခေါင်းထဲ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်း ကြောက်လာတယ်၊ မလေ့လာ ချင်တော့ဘူး၊ “ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်ရင် အားနည်းတယ်” ဆိုပြီး ခေါင်းရှောင်နေမိတယ်။ ပြောရရင် စာမရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ကျောင်းတက်ရမှာ ကြောက်နေသလိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် အကျိုးဆက်က ဘာဖြစ်လာလဲ ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်တာ ကျွန်တော်ဘာမှ မသိတော့ဘူး၊ အားလုံးနီးပါး သိကြတဲ့ အရာကိုတောင် ကျွန်တော့်အတွက် နားလည်ဖို့ ခက်နေတယ်၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အရမ်းကို နောက်ကျကျန်ခဲ့တယ်၊ လွယ်လွယ် လုပ်လို့ ရနေတဲ့ အရာကို မလုပ်တတ်တော့ဘူး၊ သိရမယ့်အရာတွေ သိခွင့်မရတော့ဘူး။ နောက်မှ တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာတယ် ကိုယ်သတ္တိမရှိခဲ့လို့ ကိုယ်ရမယ့် အခွင့်အရေးနဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို “မလုပ်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့မိတာပဲ။ အားနည်းချက်ကို အကြောင်းပြပြီး ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ ကြောက်နေခဲ့မိတာလေ။
ကျွန်တော့်လိုမျိုးတွေ တစ်ချို့ ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ် မတူညီတဲ့ အကြောင်းပြချက် ကိုယ်စီနဲ့ အကြောက်တရားတွေပေါ့။ ကိုယ်တစ်ခုခုအပေါ်မှာ အားနည်းတာ၊ မကျွမ်းကျင်တာမျိုးက လူတိုင်းမှာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ရှိတတ်ပါတယ် ပြီးတော့ ဒါကိုယ့်အပြစ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားနည်းပါတယ်ဆိုပြီး ပစ်ထားခဲ့ရင်၊ ခေါင်းရှောင်ခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်အမှားပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးသာ ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် အကြောက်တရားက ပိုပိုပြီး ကြီးလာလိမ့်မယ်။ “မလုပ်နိုင်ဘူး အားနည်းလို့” ဆိုတာကို နေရာတကာ သုံးမိနေလိမ့်မယ်။ တခြားအရာတွေကိုတောင် စမ်းသပ်ဖို့ သတ္တိနည်းလာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆို အားနည်းချက် သေးသေးလေးက အကြီးမားဆုံး အကြောက်တရား ဖြစ်လာမယ် မတိုးတက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဒီလို အကျင့်လေးတွေကို ပြင်ပေးဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။
မှန်ပါတယ် ဒီလိုအကြောက်တရား ထဲကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ တကယ်မလွယ်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ရုန်းထွက်ပြီး ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အရင်ဆုံး စိတ်ဓာတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးရင် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုနဲ့ လက်တွေ့ ပူးပေါင်းမှပဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ရုန်းထွက်နိုင်မှာပါ။ ဒါဆိုရင် အားနည်းချက်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့၊ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပုန်းနေတာတွေ မဖြစ်တော့အောင် ဘယ်လို နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်ကြမလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။
၁. အောက်ခြေကနေ လေ့လာပါ
တစ်ခါတည်းနဲ့ အကြီးကြီးတွေ သွားလုပ်လို့ မဖြစ်တာမို့ ကိုယ်အားနည်းခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့ အရာကို ဟိုး အောက်ခြေကနေ တစ်ဆင့်ချင်း လေ့လာပါ။ ကိစ္စရပ်တွေ အများစုမှာ အခြေခံက အရေးကြီးဆုံးမို့ တစ်ခါနဲ့ မရရင် နှစ်ခါ သုံးခါလောက် ဖြစ်ဖြစ် အောက်ခြေကို နောကြေပိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ တစ်ခါတည်းနဲ့ တတ်သွားမယ်တော့ မထင်ပါနဲ့။ အဲလို အများကြီး မျှော်လင့်လွန်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးတာကလည်း မကောင်းပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် စိတ်ကို ရှင်းရှင်းထားပြီး အခြေခံကို မကျွမ်းကျင်မချင်း လေ့လာပါ။ အောက်ခြေကို ပိုင်နိုင်သွားရင် နောက်တစ်ဆင့်ဆိုတာ လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သတ္တိလည်း ပိုရှိလာမှာပါ။
၂. နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားပါ
ကိုယ်က လေ့တော့လေ့လာပါရဲ့ ဒါပေမယ့် နားမလည်ပါဘူး၊ ဘာမှမထူးပါဘူး ဆိုပြီး လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ နည်းလမ်းဆိုတာ အမြဲရှိပါတယ်။ ဒီတစ်နည်းနဲ့ လေ့လာလို့မှ နားမလည်ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်နည်းနဲ့ စမ်းသပ်ပါ။ ကိုယ်နားလည် သဘောပေါက်တဲ့အထိ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ စာဖတ်လို့ နားမလည်ရင် Video ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲလိုမျိုးတွေပေါ့။ တစ်ချို့တွေက တစ်မျိုးလောက် စမ်းပြီး အဆင်မပြေတာနဲ့ “လုပ်တာပဲ မရဘူး” ဆိုပြီး လွယ်လွယ် အရှုံးပေးတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ နည်းလမ်းမျိုးစုံ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ကြိုးစားပြီးမှ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အရင်ဆုံး နည်းလမ်းတွေ ရှာပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါ အဆင်ပြေတာ တစ်ခုခုတော့ သေချာပေါက် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ဒီနေရာမှာလည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက လိုအပ်လာပြန်တာပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်း ခက်ခက်ခဲခဲ သဲကြီးမဲကြီးနဲ့ လေ့လာနေတာထက်စာရင် အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ၊ ဝါသနာပါတဲ့သူ၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးနဲ့ သိထားရင် ကိုယ်လေ့လာတဲ့နေရာမှာ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျောင်းမှာ စာနားမလည်လို့ သူငယ်ချင်းက ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါ ပိုရှင်းပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ နားလည်သွားသလိုပဲပေါ့။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်မသိတာတွေ၊ နားမလည်တာတွေကို သူတို့ ရှင်းပြပေးလို့ ရတယ်၊ အတူတူ ရှာဖွေလေ့လာလို့ ရတယ်၊ သူတို့က သင်ပြပေးနိုင်တယ် ပြောရရင် ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်သုံးကောင် ပစ်လိုက်သလိုပေါ့။ အပေါင်းအသင်းလည်း တိုးလာမယ်၊ သိချင်တာလည်း သိရမယ်၊ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်လေ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်မလုပ်ဘဲ အပေါင်းအသင်း နယ်ချဲ့ကြည့်ပါနော်။
၄. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိန်ခေါ်ပါ